Posted by ညီလင်းသစ် au 20.8.14
အိုက်ကို... အိုက်ကို... အိုက်ကို... :)
(သဘောကျလို့ အကြီးကြီး ပြုံးနေမိ)
အိုက်ကို အိုက်ကို နာမည်လေးလှတယ်
ဘာအလုပ်ကိုလုပ်လုပ် စည်းစနစ်လေးနဲ့ လုပ်လေ့လုပ်ထ ရှိတဲ့ မောင်ညီလင်းရဲ့ အိုက်ကိုလေးအကြောင်း ဖတ်သွားတယ် ...
အကောင်ပလောင်တွေကိုမချစ်တတ်ပေမယ့် အစ်ကိုကြောင်လေးကိုတော့ ချစ်စရာကောင်းတယ်လို့မြင်သွားပါတယ်...။ တကယ်ချောတဲ့ကြောင်ကလေးပဲ..။ကြောင်ကိုငမ်းသွား(အဲ....)
အဲ ကြောင်လေးက ချစ်စရာလေး
အိမ်မှာလည်း မွေးထားတယ် နှစ်ကောင်
ကြောင်တွေကို သိပ်မချစ်တတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အိုက်ကိုလေးက အရမ်းချစ်စရာကောင်းပါ့လား။
သားသားတော့ အဖော်သစ်ရလို. သိပ်ပျော်နေရောပေါ့။
အိုက်ကိုလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ သားသားတော့ အိုက်ကိုနဲ့ အလုပ်များနေမှာ မြင်ယောင်သေးတယ်။ :)
ဂျပန်နာမည်နဲ့ ကြောင်ဖြူလေးက မျက်လုံးအပြာလေးနဲ့ပါလား။း)
အစ်မသက်… အစ်မသက်… အစ်မသက်
(ပြန်တွေ့ရလို့ သဘောတကျနဲ့ ပြုံးနေမိ)
အဲဒါ ပြန်ဖြေတာ…းP
ဘယ်ဆီကို မင်းရောက်နေလဲ xxx ဘာတွေကို မင်းလုပ်နေလဲး)
ကျေးဇူးပါ တီတင့်ရေ…၊ ကျနော်တို့တွေ မဆုံဖြစ်ကြတာ ကြာပြီနော်၊ နေကောင်းတယ်ဟုတ်…?
အကောင်ပလောင်တွေကို မချစ်တတ်ဘူး ဆိုပေမယ့် အတောင်ပံပါပြီး ငှက်မဟုတ်တဲ့ တမန်တော်လေးတော့ ပါမယ် မထင်ပါဘူးလေ…၊းD
ကြောင်က မျောက်ရှုံးအောင် ဆော့ပြီဆိုရင်တော့ မျောက်အပါအဝင် ကျန်တဲ့ သတ္တဝါတွေ မွေးဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီဗျ…၊းD
ကြောင်လား? ကြောင်ပိုင်ရှင်လား? ရှင်းရှင်းပြောပါလေ…။း)
ဟုတ်…၊ သူကတော့ အဖော်ရလို့ ပျော်နေလေရဲ့ဗျာ…၊
ဟော… ကွန်နက်ရှင်ကို အံတုပြီး လာဖတ်တယ်လား?း) နောက်ကျမှ အိုက်ကိုနဲ့ ကစ်ကစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးရမယ် ထင်တယ်… နော၊းD
ဂျပန်နာမည်တင် ဘယ်ကမလဲ၊ သူ့နောက်ကျောမှာ ကင်ဒိုလည်း လွယ်ထားသေးတယ်၊ ကွယ်နေလို့ မမြင်ရတာ…။းD
အစ်ကို့ကို ပြန်တွေ့ခွင့်ရလို့ တစ်ခါမှမချစ်တဲ့ကြောင်ကလေးကို ချစ်သွားတယ်..။
ချစ်စရာလေး ချစ်စရာလေးလို့ ရေရွတ်ပလိုက်တာပဲ :)
သားသားတော့ ကြောင် နဲ့ ဆော့နေမှာ မြင်ယောင်နေသေးတယ်..။ :))
ချစ်စရာလေး….။ “အိုက်”ဆိုတာ တရုတ်လို “ချစ်”လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်လေ၊ ဒီတော့ သူက မြန်မာနာမည် မောင်ချစ်ကိုပေါ့နော် 
အိုက်ကို ပုံစံက စတိုင်လ်ကြိး တစ်ခွဲသားနဲ့း) ကျနော်လည်း ကြောင်ဆို တအားချစ်တာ ဒီမှာတော့ မမွေးရပါဘူး ။
ပို့စ်လေးတက်လာလို့ စိတ်ပူနေတာ တော်သွားတယ် နေများကောင်းရဲ့လားလို့ အိုက်ကို ရဲ့ သခင်လေးအကြောင်းလည်းဖတ်ချင်ပါသေးတယ်ဗျာာာ
ဆော့တာကတော့ အတော်ဆော့တယ်ဗျ…၊ ကြောင်ကို အတင်းမဆွဲဖို့ ပြောနေရတယ်…၊း)
ဟုတ်လား…၊ ကျနော် အခုမှ သိတော့တယ်၊ အင်း… နောက်ဆို တရုတ်မလေးတွေ ရှေ့မှာ “အိုက်တယ်” လို့ မပြောမိအောင် သတိထား နေရတော့မယ်…၊ :D
အကြာကြီး ပျောက်နေပြီးတော့မှ ဟောဒီ ကွန်မန့်လေး ပြန်တွေ့ရလို့ ဝမ်းသာမိတယ်ဗျာ…၊ အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်…? အိုက်ကိုရဲ့ သခင်လေး အကြောင်းလည်း ရေးပါဦးမယ်…၊
ဟုတ်…၊ ကျေးဇူးပါ၊ ကျနော် သူ့ကိုလည်း ပြောလိုက်ပါ့မယ်..။း)
အိမ်က အမွှာတွေလည်း ကြောင်မွေးချင်လို့ ပူဆာနေတယ်။ ကရိကထများလွန်းလို့ စဉ်းစားနေဆဲ အဆင့်မှာပဲ ရှိသေးတယ်။ အိုက်ကို ကို သဘေတကျနဲ့ လာငေးမောသွားပါကြောင်း
ပစ်ကတော့ ကြောင်တွေ ခွေးတွေ မချစ်တတ်ဘူး..
ဒါပေမဲ့ ချစ်စရာကောင်းတာလေးတွေ တွေ့ရင်တော့
ဟိုကလိဒီကလိ ဟို စ ဒီစ တော့ လုပ်ချင်သား...
ပစ်တို့ အိမ်ရှင် အခန်းမှာလည်း ကြောင်တကောင်ရှိတယ်..
အဲကောင်က စိတ်မှတ်ကြီးတယ်.. သူ့ကိုတခါအော်ထားမိလို့တဲ့
အိမ်ရှင်အန်တီ ကြီးခေါ်ရင် လုံးဝကို လှည့်မကြည့်ဘူး..
ပုံစံလေးပြတယ်... ကြောင်ကို တလတခါ ကြောင်ဗြူတီပါလာ
ပို့ပြီး သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးရတယ်ပြောတယ်..
နွေဘက်ဆို အမွှေးလည်း ညှပ်ပေးရတယ်..
ဆောင်းတွင်းဝတ်ဖို့ အကျီတွေလည်း ဝယ်ထားပေးတာ
များကြီးဘဲ...သူ့အတွက် ပုံးတပုံးနဲ့ သပ်သပ်ထည့်
ကြောင်တွေကို စံနစ်တကျ မွေးမြူကြတာ အားရစရာ။ တို့ ဒီမှာတော့ ဒီတိုင်းလွယ်လွယ် မွေးကြတာပဲနော်။ သားသားကတော့ ပျော်နေရှာမှာ မြင်ယောင်မိသေး။